खाको केइ पच्दैन? उसोभये बजाराँ आको त्यो प्लास्टिकको चामल पकाई खानु… चाइनिज जे नि पच्छ यहाँ - Worldnews.com
खाको केइ पच्दैन? उसोभये बजाराँ आको त्यो प्लास्टिकको चामल पकाई खानु… चाइनिज जे नि पच्छ यहाँ
The post खाको केइ पच्दैन? उसोभये बजाराँ आको त्यो प्लास्टिकको चामल पकाई खानु चाइनिज जे नि पच्छ यहाँ appeared first on News of Nepal. ...
काठमाडौंमा १० बजेपछि देउसीभैलो खेल्न नपाइने
नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं । काठमाडौंमा १० बजेपछि देउसीभैलो खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार सूचना जारी गर्दै राति १० बजेसम्म मात्र...
मल्टिक्सको थ्री इन वान गाडी बजारमा
काठमाडौं, (नेस) बाबा समूहअन्तर्गतको बाबा अटोमाटा ट्रेडिङ प्रालिले पानी तान्ने पम्पदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने जेनेरेटरका रुपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गाडी नेपाली बजारमा...
काठमाडौ । सुरक्षाको कारण देखाउँदै गृहमन्त्रालयले तिहारमा बेलुका १० बजेसम्म मात्र देउसी–भैलोलगायत सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्नै गृहले...
कोलकातामा पनि देउसीभैलोको रौनक
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । संयुक्त नेपाली वेलफेयर ट्रष्टको आयोजनामा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा गोवद्र्धनपूजाका दिन देउसीभैलो खेलिएको छ । कार्यक्रममा महावाणिज्यदूत...
News of Nepal 2017-10-21
काठमाडौँ, ९ जेठ । आगामी आवको बजेटको तयारीका बारेमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको दोस्रो...
सूचना टाँस गरेर संसद बैठक ५ बजेसम्मलाई स्थगित
काठमाडौ (नेस) । ब्यवस्थापिका संसदको बैठक ५ बजेसम्मका लागि सुचना टाँसेर स्थगित भएको छ । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक १ बजेका लागि सारिएको थियो । तर १ बजे पनि बैठक बस्न नसकेपछि...
काठमाडौ (नेस) । ब्यवस्थापिका संसदको बैठक ५ बजेसम्मका लागि सुचना टाँसेर स्थगित भएको छ । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक १ बजेका लागि सारिएको थियो । तर १ बजे पनि बैठक बस्न नसकेपछि बैठक फेरी ३ बजेका लागि तय गरिएको थियो । ३ बजेका लागि सारिएको बैठकपनि शुरु हुन नसकेपछि बैठक ५ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । मंगलबार बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष...
दाङ, तिहारसँगै गाउँ तथा शहर जताततै देउसी भैलोको रौनक छ । क्लब, समूह, सहकारी, विद्यालयदेखि यहाँका सञ्चारकर्मीलाई देउसी भैलोले छोएको छ । बालक, युवा र वृद्धसम्म तिहारको देउसी भैलोमा झुमिरहेका छन् । तर देउसी भैलोको मौलिकता भने बर्सेनी हराउँदै गएको छ । विशेष गरी तिहारको अवसरमा नाचिने सोरठी, पैस्यारु, टप्पा, वनगारीलगायतका नाच हराउँदै गएका छन् । यसको सट्टा भैलोेमा तोकेरै पैसा असुल्ने,...
प्युठानमा यसरी खेलियो देउसी भैलो
तिहार पर्व २०७४ को अबसरमा सरुमारानी १ बर्नविर प्युठानका युवाहरु मिलेर खेलेको देउंसी भैलो।खुब रमाइलो रह्यो यसपालिको तिहार।खास गरि यो मारुनी नाच मगर समुदायमा लोकप्रीय छ।उनिहरुको यो पुरानो संस्कृती हो। भिडियो रिर्पोट सलिम अन्सारी, प्युठान http://www.newsofnepal.com/wp-content/uploads/2017/10/video-1508923084.mp4 The post प्युठानमा यसरी खेलियो देउसी भैलो appeared first on News of...
सम्भावित बन्दुक आक्रमणको खतरापछि न्युयोर्कको कलेज बन्द
प्रहरीले सम्भावित बन्दुक आक्रमण हुनसक्ने सुचना पाएपछि सोमबार न्युयोर्कको युटिका कलेज बन्द गरिएको छ । अपस्टेट न्युयोर्कमा रहेको युटिका कलेजमा सम्भावित बन्दुक आक्रमणका कारण सोमबार कलेज बन्द गरिएको हो । दिउसो १२ बज्नु अगाडि प्रहरी अधिकारीहरुले कलेजमा फोन गरेर सबै विद्यार्थीहरुलाई बाहिर निकालेर कलेज खाली गराउन आदेश दिएका थिए । कलेजमा रहेका एकजना बन्दुकधारीले प्रहरीलाई फोन गरेर...